Nagu saabsan - Hangzhou Kindherb Biotechnology
KINDHERB waa shirkad tiknoolajiyad sare ku takhasustay laguna horumariyo soosaarka dhirta. Tan iyo hadda waxaan horey u soo aragnay in ka badan 8 sano. Waxaa naga go'an horumarinta iyo horumarinta daawo dhaqameedka Shiinaha, oo leh salka alaabta ceeriin ee GAP, ka shaqeynta wax soo saarka GMP iyo shahaadada tayada leh ee ISO9001 / Kosher / FDA / QS, iyo inbadan oo caan ku ah cuntada, wax soo saarka caafimaadka, daawada iyo waxyaabaha la isku qurxiyo. warshadaha iyo aduunka. Shirkaduhu waxay aasaaseen xiriir iskaashi istiraatiijiyadeed oo muddo dheer ah.
KINDHERB xafiiska wuxuu ku yaal Hangzhou, gobolka Zhejiang. Waxaan ku takhasusay soo saarista iyo suuqgeynta soosaarida Rhodiola rosea, soosaarida Ginseng, Maca extract, iyo Coleus forskolii extract. Resveratrol, Berberis aristata extract, mangosteen laga soosaaray iyo waxyaabo kale oo dabiici ah iyo soosaarida daahirnimo sare ee walxaha ka shaqeeya dhirta iyo soosaarida heerarka.
KINDHERB waxay fiiro gaar ah siineysaa isku darka tikniyoolajiyadda iyo teknolojiyadda, iyo baahida suuqa waxay hubineysaa in badeecada ay ka kooban tahay tiknoolajiyad sare iyo adeegsi ballaaran, waxayna muhiimad weyn siineysaa ilaalinta deegaanka iyo waxtarka sare. Waqtigan xaadirka ah, wax soo saarka shirkadda waxaa si ballaaran u aqoonsaday shirkadaha gudaha iyo kuwa shisheeye.
Warshadda Kindherb oo ku taal Xian, gobolka Shanxi, waxaan xirfad u leenahay in aan soo saarno oo aan horumarinno soosaarida nadiifnimada sare ee geedaha iyo budada dhirta in ka badan 8 sano. alaabooyinka oo dhami waxay u qalmaan taxanaha ISO, Kosher, iyo HALAL.
Iyadoo loo marayo habdhaqanka maaraynta tayada sanadihii la soo dhaafay, Nutripure waxay yagleeleen dhaqan maamul tayo leh, waxay aasaaseen nidaamkayaga maaraynta tayada oo dhan, sida ISO9001: Nidaamka maaraynta tayada 2015 iyo shahaadada HACCP. Waaxda QC waxay kormeertaa oo maamushaa, xakameysaa alaabta ceyriinka ah, badeecadaha dhexdhexaadka ah, tayada wax soo saarka oo dhameystiray si adag iyadoo loo eegayo heerarka maaraynta tayada ee SMP, heerarka farsamada tayada leh ee STP, heerka tayada shaqada SOP.
Waxaan haynaa bakhaarkeenna keydinta ee dhirta loo qoondeeyay, nadaafad, qabow, hawo iyo ur la'aan. Si adag u dhaqan gal una raac sharciyada warshadaha ee ah in dhamaan weelasha baakaduhu ay ahaadaan kuwo qallalan, nadiif ah, wax urin ah oo ay samaysteen waxyaabo caafimaad qaba. Dhammaan baakadaha waxaa ku duudduuban filimka difaaca gaarka ah, waa adag tahay, daboolan tahay, qoyaan, si buuxda u ilaalin kartaa tayada.
Soosaarida Tribulus Terrestris, Soosaarida xididka Ginseng, Bromelain, Soosaarida Shaaha Oolong, Soosaarida Thymus Vulgaris, Marigold Extract Lutein,